कांग्रेसलाई सत्ता प्यारो छैन, आगामी चुनावमा पहिलो शक्ति बन्छौँः डा. मीनेन्द्र रिजाल
फरकधार / २९ मंसिर, २०७७
कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मीनेन्द्र रिजालले कांग्रेसलाई सत्ता प्यारो नभएको बताएका छन् । कांग्रेस तनहुँले आज दमौलीमा आयोजना गरेको विरोध कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमन्त्री डा. रिजालले जनताले कांग्रेसलाई आफ्नो माझ खोजेको र अबको चुनावपछि कांग्रेस पहिलो शक्ति बन्ने जिकिर गरे ।
‘गएको निर्वाचनमा कांग्रेस थोरै मतले पछाडि परेको हो, अझै पनि जनताको भरोसा यो पार्टीमा छ,’ उनले भने । वर्तमान सरकार ५ वर्षसम्म नै चलोस् भन्ने कांग्रेसको शुभेच्छा रहे पनि सरकारले जनभावना नबुझेको डा. रिजालको आरोप थियो ।
संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेस सदैव प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै पूर्वमन्त्री डा. रिजालले जनताका पक्षमा काम गर्न सरकारलाई सुझाब दिए ।
सो अवसरमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द भट्टराईले सरकाले स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाएको आरोप लगाए । कांग्रेस तनहुँका सभापति वैकुण्ठ न्यौपानेले सरकारले राम्रो काम नगरेको जनाउँदै सोही कारण कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताए ।
महासमिति सदस्य रामचन्द्र पोखरेलले कांग्रेसलाई निषेध गर्न खोजिएको जनाउँदै सोही कारण आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । कांग्रेस तनहुँका कार्यबाहक सभापति जीतप्रकाश आलेको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभासद् डोबाटे विक, सरिता गुरुङलगायतले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रकाशित मिति : मंसिर २९, २०७७ साेमबार २०:३२:२२, अन्तिम अपडेट : मंसिर २९, २०७७ साेमबार २०:४८:२